Fanosorana ny misionera andiany Fanantenana - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
“Fanantenana”, io no anarana nisaloran’ireo misionera andiany farany izay navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny sabata faha 08 septambra 2012 lasa teo. Araka izany dia fihaonam-be teo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo no notontosaina tamin’io fotoana io. Tetsy Ambohimarina Itaosy no nanaovana izay fotoan-dehibe izay, ary nitarika ny fotoana tamin’izany ny ray aman-dreny pasitera Mailhol.
Tamin’ny fotoana tapany maraina dia nisy ny filaharam-be izay noentin’ny sampana Sekoly Sabata nanamarika ny faha 15 taona nijoroany. Nandray anjara tamin’izany ireo mpianatra sy mpampianatra sekoly Sabata manerana ny rezionaly Antananarivo. Marihina fa ireo mpampianatra sekoly sabata ireo dia vao avy nanaraka fiofanana nandritra ny 3 volana, mba hanatsarana hatrany ny fampianarana.
Ankoatra izay dia fantatra fa efa ho avy tsy ho ela ny fahitalavitra, mandeha ao amin’ny tambazotra «Internet ». Efa eo ampikirakirana izany ireo tompon’andraikitra rehetra, ary nitondra ny anjara birikiny, ho fanohanana izany fahitalavitra izany ny fiangonana rehetra tamin’io fotoan-dehibe teny Ambohimarina io.
Satria efa maro ihany koa ny Fiangonana Apokalypsy any ampitan-dranomasina (Chine, Frantsa, La Réunion sns…) dia nohampitaina mivantana tamin’izy ireo ihany koa ny toriteny nataon’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol tamin’io sabata io. Ary tsy tamin’ny fiteny malagasy ihany izany toriteny izany fa tamin’ny fiteny anglisy ihany koa. Nisongadina tao anatin’ny toriteny nataon’i pasitera Mailhol tamin’io fotoana io fa tsy maintsy ho toriana amin’ny feo mahery manerana izao tontolo izao ny filazan-tsara, dia ny bokin’ny Apokalypsy izany. Nambarany fa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo izay feo mahery izay. Toriteny izay notsoahina tao amin’ny Daniela 2: 1-3, sy Matio 24: 12-14 ary ny Apokalypsy 14: 6-7.
Ny fotoana tapany hariva kosa no nanosorana ireo 12 mirahalahy hanao ny asan’ny misionera. Nandritry ny enim-bolana no nanatrika ny fiofanana tao amin’ny toeram-pianarana Karmela Itaosy izy 12 mirahalahy ireo. Ny ray aman-dreny pasitera Alpha RAKOTONIRINA no nitarika ny fampianara azy ireo tamin’izany, izay nampian’ireo mpampianatra hafa. Taorian’ny fanosorana azy ireo ho misionera dia voatendry avy hatrany, hiasa amin’ny faritra maro eto Madagasikara izy 12 mirahalahy. Ankoatr’izay dia voahosotra ho diakona ihany koa ny vadin’izy ireo tamin’io sabata io ihany.
Ireo rehetra ireo dia nofaranana tamin’ny firaisana latabatra amin’ny Tompo. Marihina fa io no fandraisana ny fanasan’ny Tompo voalohany natrehan’ireo vao vita batisa farany tamin’ny sabata voalohan’ny volana septambra 2012 lasa teo. Raha tsiahivina dia teo amin’ny 439 mianadahy teo no vita batisa tamin’io fotoan-dehibe io, izay notanterahina teny Andranotapahina Ambohdratrimo.
Mitohy kosa ny famaranana ny fampianarana Apokalypsy iarahana amin’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol. Taorian’ny faritra avaratry ny nosy dia hitohy somary miantsinana kely izay famaranana izay ka ao Ambatondazaka no hanatontosana azy ny sabata 15 Septambra 2012 izao. Hisy ny fotoam-pivavahana lehibe amin’io fotoana io, izay ialohavana kaoferansa lehibe. Ankoatr’izay dia hisy ihany koa ny fanokanana ny Radio Fanambarana Ambatondrazaka ny Alakamisy 13 Septambra 2012. Efa any an-toerana rahateo ireo solotena avy aty Antananarivo. Ho avy hanotrona io famaranana io ihany koa ireo mpino ao amin’ny Fiangonana Apokalypsy eo amin’ny rezionaly Antananarivo.